Grafayithi nokuvunda Abavelisi & Suppliers | China Grafayithi sokubumbela Factory
Grafayithi sokubumba enokumelana elungileyo lobushushu eliphezulu, ukusebenza ezinzileyo kwiqondo lobushushu eliphezulu, intwana yokwanda ubushushu kunye shrinkage ebandayo, nto leyo ingahoywa; Igrafayithi ine-lubricity elungileyo, kwaye ulwelo lweglasi akukho lula ukunamathela ekubunjeni ngexesha lokuqina, kwaye ine-conductivity elungileyo yokuhambisa, ukunxiba ukumelana, amandla oomatshini aphezulu kunye nezinye izinto. Kwimveliso yezemizi-mveliso, ukufezekisa iziphumo ezichanekileyo zemveliso, akufuneki kukhethwe kuphela izixhobo zegrafayithi ezifanelekileyo, kodwa kuyilo lwesikhunta segraphite, ukuqhubekeka komgangatho kunye nokufakwa ngokuchanekileyo ekusebenziseni kubaluleke kakhulu. Sinesakhono sokubonelela ngenkxaso yobuchwephesha yobuchwephesha ukunceda abathengi bakhethe izixhobo ezifanelekileyo zegraphite kwimveliso, uyilo kunye nenkqubo yesinyithi esenziwe ngezixhobo ezifanelekileyo kwizixhobo zemveliso, kwaye singathanda ukumamela izimvo zabathengi ngononophelo, kwaye sisombulule iingxaki ezidibana nabathengi kwinkqubo yokusebenzisa.
I-graphite Super evutha njengomphunga isikhephe / i-graphite therap evaporation is crucible / electron beam evaporation boat / coating vacuum aluminium plating silicon / super graphite evaporation boat / electron beam evaporation vacuum coating instrument graphite crucible
Grafayithi semicircle isikhephe senziwe ngezinto zegraphite, ezinezi zinto zilandelayo: ukumelana nobushushu obuphezulu, ukusebenza kakuhle kokuthambisa, kulula ukutyhala kunye nokutsala, akukho lula ukunamathela kwezinye izinto, amandla aphezulu, akukho lula ukonakalisa.
Grafayithi nokuvunda for eyahlulayo ngokuqhubekayo zesinyithi nonferrous
Olu hlobo lokungunda lineemilo ezahlukileyo zomngxunya omnye, imilo ekhethekileyo eneentunja, ukungunda komzimba. Olu hlobo lokungunda lulungele ukujulwa okungagungqiyo kobhedu, ialuminium, isinyithi kunye nentsimbi. Le mveliso imveliso high-ntumbuluko grafayithi, kunye nokusebenza ezinzileyo kunye nobuchwepheshe processing elungileyo, nto leyo esisetyenziswa ngokubanzi kushishino metallurgical.
I-Semiconductor kunye nomzi mveliso we-elektroniki
I-semiconductors zizinto ezinokuqhutywa phakathi kwabaqhubi kunye nee-insulators kubushushu begumbi. Ii-semiconductors zisetyenziswa kakhulu kunomathotholo, kumabonwakude nakumlinganiso weqondo lobushushu.
Hot ecinezelweyo grafayithi sokubumba
Uxinzelelo kunye nokufudumeza kwenziwa kwinkqubo enye, kwaye i-compact sinter inokufumaneka emva kwexesha elifutshane lokuntywila, okunciphisa kakhulu iindleko. Phantsi kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu, ithuba lokusebenzisa izinto zegraphite zinenzuzo eyahlukileyo xa kuthelekiswa nezinye izinto. Ngenxa yokuba ukungalingani kokukhula komgama kwezinto ezibonakalayo zegraphite zincinci, imilo kunye nobungakanani bokuzinza kweemveliso eziveliswe yiyo ziphezulu kakhulu.